Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Delta Air Lines waxay soo iibsatay 30 diyaaradood oo kale oo ah Airbus A321neo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Ku darista diyaaradda Airbus A321neo waxay xoojineysaa ballanqaadkii Delta Air Lines ee ahaa in lagu beddelo maraakiibtii hore diyaarado waara oo hufan.
Delta Air Lines waxay dalbanaysaa 30 dayuuradood oo dheeraad ah oo ah Airbus A321neo.
Amarka cusub ayaa keenaya Airbus amarada aadka u sarreeya ee Delta ilaa 155 A321neos.
Delta waxay muujineysaa hoggaan mas'uul ah waxayna ku bixinaysaa cod kalsooni oo xoog leh hadda A321neo.
Delta Air Lines ayaa amartay 30 diyaaradood oo dheeraad ah oo ah Airbus A321neo si ay gacan uga geystaan ​​buuxinta shuruudaha maraakiibta ee mustaqbalka. Diyaaradaha cusub ee la dalbaday waxaa u dheer amarrada diyaaradda ee ahaa 125 nooc, taasoo ka dhigaysa Delta amarada ka maqan wadar ahaan 155 A321neos.
Ku -daridda diyaaradahan waxay xoojineysaa ballan -qaadkii Delta ee ahaa in lagu beddelo maraakiibtii hore oo la sii raaciyo diyaarado waara oo wax -ku -ool ah, iyo bixinta khibradda macmiilka ee ugu wanaagsan warshadaha, ”ayay tiri Mahendra Nair, Delta Air Lines'Madaxweyne Ku Xigeenka - Silsiladda Bixinta Fleet iyo TechOps. "Delta waxay qaddarineysaa iskaashiga ballaaran ee kooxda Airbus ee taageeraya qorshayaasheena kobcinta istiraatiijiga ah, waxaanan rajeyneynaa inaan sii wadno wada shaqeynta inta lagu jiro soo kabashada iyo wixii ka dambeeya."
"Iyada oo warshaduhu u muuqdaan inay ka soo baxayaan masiibada, Delta waxay muujineysaa hoggaan mas'uul ah waxayna ku bixinaysaa cod kalsooni leh A321neo," ayuu xusay Christian Scherer, Madaxa Sarkaalka Ganacsiga iyo Madaxa Airbus International. “Iyada oo la amrayo 30 ka badan oo diyaarad ah oo baahi weyn loo qabo adduunka oo dhan, shuraakadayada Delta waxay hoosta ka xarriiqayaan doorka istiraatiijiyadeed ee ay u arkaan A321neo iyada oo waxqabadkeeda deegaanka ee aadka u wanaagsan u ah adeegga macmiilka ee caanka ah iyo kalsoonida sanadaha mustaqbalka. ”
Delta A321neos waxaa ku shaqeyn doona jiilka xiga Pratt & Whitney PW1100G matoorrada turbofan kuwaas oo keena wax-ku-oolnimo la taaban karo marka loo eego Delta oo ah A321 diyaaradood oo horeba u shaqaynaysay. Waxaa lagu qalabeeyay fadhiga guud ee macaamiisha 194 oo leh 20 Fasalka Koowaad, 42 ee Delta Comfort+ iyo 132 gudaha Cabin -weynaha, Delta's A321neos ayaa la geyn doonaa ugu horreyn shabakadda ballaaran ee gudaha ee diyaaradda, taasoo kaabaya Delta hadda A321 oo ka badan 120 diyaaradood. Diyaaradda ayaa la qorsheeyay in ay hesho diyaaraddii ugu horreysay oo ah 155 A321neo horaanta sanadka soo socda.
Qaar badan oo ka mid ah Delta's A321neos waxaa laga keeni doonaa Xarunta Wax -soo -saarka ee Airbus US ee Mobile, Alabama. Shirkaddu waxay qaadatay 87 diyaaradood oo Airbus ah oo Maraykanku soo saaray tan iyo 2016kii.
Dhammaadkii bishii Luulyo, raxantii Delta ee diyaaraddii Airbus waxay ahayd 358, oo ay ku jiraan 50 diyaaradood A220, 240 A320 Xubno Qoys, 53 A330 ballaaran, iyo 15 A350 XWB diyaarad.